Umbrella Na Car Window Breaker Suppliers & Factory - China Umbrella Na Car Window Breaker Manufacturers
Car windo emebi abụọ Dual-nzube onwe-oghere na retracting ụgbọ ala nche anwụ Car mberede hama Life-azọpụta window emebi emebi 7902SBT
Multi-ọtọ: Ọ ga-eji dị ka a nche anwụ, ntekwasa na nwa mama, abụọ-oyi akwa okpomọkụ mkpuchi, anyanwụ nchebe, na UV igbochi. Enwere ike iji ya dị ka nche anwụ. A na-eji akwa mmiri na-ekpuchi ya ma na-ekpuchi mmiri. E nwere ihe nkedo na-atụgharị uche n'akụkụ nche anwụ, nke na-enwupụta n'abalị, ma nwee ịdọ aka ná ntị iji hụ nchekwa onwe onye. Ihe nche anwụ na-arụ ọrụ na windo windo, nke enwere ike iji dị ka hama nchekwa na mberede.
Ajọ na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide: nhazi nke okpukpu ise nke ọgịrịga asatọ nke eriri nche anwụ dị ike megide ifufe. Ọbụlagodi na ọgịrịga ọgịrịga ya fụrụ afụ, ha ka nwere ike ọ gaghị emebi emebi, kpoo ya nwayọ nwayọ.